‘रुद्रप्रिया’का लागि आर्यनले रहरले बनाएको ज्यान घटाए - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
‘रुद्रप्रिया’का लागि आर्यनले रहरले बनाएको ज्यान घटाए
२७ असोज,२०७४ | Gufgaf
काठमाण्डौ असोज २७ ✎ कार्तिक २ गते देखि देशभर प्रदर्शनमा आउन लागेको सिनेमा ‘रुद्रप्रिया’ यतिबेला चर्चामा छ । प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गरेका कारण र आठ वर्षपछि रेखा र आर्यन एउटै पर्दामा आएका कारण सिनेमाको चर्चा बढ्दै गएको हो । रेखा र आर्यनको मुख्य भूमिका रहेको यस सिनेमाको कथा भने अहिलेसम्म रहस्यमय नै छ । नारीवादी भनिएको यो सिनेमा कुन विषय वस्तुमा आधारित त्यसको आधिकारिक जानकारी छैन । सिनेमाको कथा के हो ? त्यो भने अब दर्शकले हलमै गएर हेरेपछि मात्रै थाहा पाउनेछन् ।
तर यस सिनेमाका लागि आर्यन सिग्देलले तौल घटाएको कुरा भने बाहिरिएको छ । सिनेमाको ट्रेलर र गीतमा सधैँ भन्दा केही दुब्लो देखिएका आर्यनसँग हामीले सिनेमाको प्रचारप्रसारको क्रममा केही कुराकानी गर्ने मौका पायौँ । यस मौकामा उनले हामीलाई सिनेमा रुद्रप्रियाका लागि आफूले १० किलो तौल घटाएको खुलाए ।
सिनेमामा काम गर्ने क्रममा १० किलो घटेका आर्यन अहिले भने मोटाईसकेका छन् । किनभने अहिले उनले खानपिनमा कन्ट्रोल गरेका छैनन् । खाने विषयमा कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘अहिले सिनेमा प्रमोशन बाहेक अरु त्यति काम पनि छैन त्यस कारण कतिबेला कहाँ जाने र के खाने ? भन्ने मात्रै भईरहको छ ।’ तिहारसम्म सिनेमा नगर्ने भन्दै अहिले आफूले खाने कुराहरुमा ध्यान नदिएको उनी बताउँछन् ।
एकताका उनी ज्यानलाई मस्कुलर बनाउने योजनामा थिए । यसका लागि उनले जिममा गएर केही वर्कआउट पनि गरे । तर ‘रुद्रप्रिया’को बाला पात्रका लागि उनले ज्यान घटाउनु पर्ने भयो । खासमा सामान्य जीवन जिउने बालाका लागि आर्यनले बनाएको ज्यान निकै खाईलाग्दो देखिन्थ्यो । उनको ज्यान सिनेमाको पात्रसँग नमिल्ने भएका कारण उनले ज्यान घटाए ।
बलिवुड र हलिवुडमा भने प्राय अभिनेताहरुले आफ्नो शरीरलाई मस्कुलर बनाएर राख्छन् । तर नेपालका प्राय अभिनेताहरुलाई रहरले मस्कुलर ज्यान बनाएपनि सिनेमाका लागि शरीरको बनावट परिवर्तन गरिहाल्नु पर्छ जसलाई छिट्टै मस्कुलर बनाउन गाह्रो पर्छ । यस विषयमा आर्यन भन्छन्, हाम्रो जीवन शैली अनुसार, हामीले जुन तरिकाले काम गर्छौ नि त्यस अनुसार मस्कुलर भईरहन भने अलि गाह्रै पर्छ । विदेशीहरुको जीवनशैली, उनीहरुको कमाई जुन छ त्यो किसिमको जीवनशैली हामीले अपनाउन अलि गाह्रै छ नि ।
काग तिहारको दिन रेडियो अडियोमा संगीतकार संघको देउसी भैलो